EducoinV စျေး - အွန်လိုင်း EDC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EducoinV (EDC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EducoinV (EDC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EducoinV ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $9 648 031.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EducoinV တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EducoinV များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EducoinVEDC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00348EducoinVEDC သို့ ယူရိုEUR€0.00297EducoinVEDC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00267EducoinVEDC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0032EducoinVEDC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0315EducoinVEDC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0221EducoinVEDC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0778EducoinVEDC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0131EducoinVEDC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00464EducoinVEDC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00489EducoinVEDC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0782EducoinVEDC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.027EducoinVEDC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0187EducoinVEDC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.261EducoinVEDC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.59EducoinVEDC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00479EducoinVEDC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00532EducoinVEDC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.108EducoinVEDC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0242EducoinVEDC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.372EducoinVEDC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4.13EducoinVEDC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.35EducoinVEDC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.256EducoinVEDC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0965
EducoinVEDC သို့ BitcoinBTC0.0000003 EducoinVEDC သို့ EthereumETH0.000009 EducoinVEDC သို့ LitecoinLTC0.00007 EducoinVEDC သို့ DigitalCashDASH0.00004 EducoinVEDC သို့ MoneroXMR0.00004 EducoinVEDC သို့ NxtNXT0.284 EducoinVEDC သို့ Ethereum ClassicETC0.000527 EducoinVEDC သို့ DogecoinDOGE1.03 EducoinVEDC သို့ ZCashZEC0.00005 EducoinVEDC သို့ BitsharesBTS0.137 EducoinVEDC သို့ DigiByteDGB0.119 EducoinVEDC သို့ RippleXRP0.0127 EducoinVEDC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000123 EducoinVEDC သို့ PeerCoinPPC0.0118 EducoinVEDC သို့ CraigsCoinCRAIG1.63 EducoinVEDC သို့ BitstakeXBS0.153 EducoinVEDC သို့ PayCoinXPY0.0625 EducoinVEDC သို့ ProsperCoinPRC0.449 EducoinVEDC သို့ YbCoinYBC0.000002 EducoinVEDC သို့ DarkKushDANK1.15 EducoinVEDC သို့ GiveCoinGIVE7.75 EducoinVEDC သို့ KoboCoinKOBO0.816 EducoinVEDC သို့ DarkTokenDT0.00321 EducoinVEDC သို့ CETUS CoinCETI10.33